जब Marmaray पूरा भयो, यूरोप र एशिया बीच फ्रेट यातायात द्रुत रूपमा वृद्धि हुनेछ | RayHaber | raillynews
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलजब मार्मारय पुरा भयो, युरोप र एशिया बीचको भाडा ट्राफिकले छिटो बढाउनेछ
जब मार्मारय पुरा भयो, युरोप र एशिया बीचको भाडा ट्राफिकले छिटो बढाउनेछ
15 / 05 / 2012 34 इस्तांबुल, दुनिया, रेल, साधारण, HEADLINE, टर्की
लुटेन अक्ससले भने, "रेलबाट बंदरगाहहरूमा अनातोलिआन शहरहरूसँग जोड्ने" साइटमा उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनेछन्, "मार्मारले पूरा भएपछि, युरोप र एशियाबीच भाँडा ट्राफिक तीव्र गतिमा बढ्नेछ। "
Izmir मा Arkas मालिक Lucien Arkas Izmir, धेरै विपरीत भएको व्यवसायी को मूल जिद्दी गर्ने संग टर्की सबैभन्दा ठूलो कन्टेनर छिटो। इजमिर छोडेर,2ले $ 55 को कारोबारको साथ एक विशाल होल्डिंग कम्पनी सिर्जना गर्यो। 15 साढे वर्ष पहिले भूमध्य र काला सागरमा निर्माण हुन थाल्यो। 15 ले देशमा कार्यालय खोलेको छ, यो यो क्षेत्रमा नियमित जहाज सेवा भएको छ। हालको सातामा, हामी आफ्नो नाम कला निवेश मार्फत सुन्न थाले। एक हजार भन्दा बढी तालिका संग टर्की कलाकारहरूको आफ्नो घर अन्तर्गत पश्चिमी चित्रकारों Lucien Arkas भेला र उहाँले बगैंचामा स्थापित संग्रहालय मा लुकाउनु भएको थियो।
लोकतान्त्रिक सञ्चालन गर्न चाहानुहुन्छ
* हवाई, सडक र रेल संग समुद्री परिवहन को संयोजन को लागि असास को प्रयास मा कुन चरण मा छ?
परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ, कहिलेकाहीँ हामी कहिलेकाहीं समुद्री रेल, कहिलेकाहीँ समुद्री रेल, कहिलेकाहीं समुद्री सडक र रेल मार्ग संयोजन गरी एकीकृत रसद सेवा प्रदान गर्दछौं। त्यसैले हामी शिपिंग लागत घटाउन प्रयास गर्दैछौ। ढुवानी लागतमा कमी कम्युनिस्ट उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्दछ, उद्योगिकलाई समर्थन गर्दछ र विकासलाई बढावा दिन्छ र रोजगारी सिर्जना गर्दछ। मलाई विश्वास छ कि टर्की मा एनाटोलिया भविष्य विकास। 'आर्कस एनाटोलिया प्रोजेक्ट' संग, हामी एनाटोलिया लाई बंदरगाहहरुमा र रेल को लाभ को उपयोग गरेर सस्ती लागत मा दुनिया को जोडन को उद्देश्य राख्छ। यसकारण, हामी त्यहाँ औद्योगिक र उत्पादकहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छौं। 2008 पछि हामी रेल उदारीकरणमा कानूनको आशा गरिरहेका छौं। के भयो भने तपाई भन्नुहुन्छ जब तपाईं बाहिर आउनुहुन्छ के हुन्छ? एयरलाइन्सको उदारीकरणको विकास पनि रेलमा अनुभव गरिनेछ। हाम्रो रेल ट्रान्स ट्राभर्सन कम्पनी एआर-गुजले 700 नजिकै नजिकका वेगनहरू छन्। निजी क्षेत्र मा सबै भन्दा ठूलो बेडा। हामी कन्टेनरहरू भ्यागमा लोड गर्दछ, रेल बनाउँदछ, तर TCDD बाट लोकोमोटिवको अपेक्षा गर्दछ। हामीसँग कुनै व्यवसाय छैन। जब उदारीकरण कानून तय गरिएको छ, हामीले लोकोमोटिव सञ्चालन गर्ने र लोकोमोटिवमा लगानी गर्ने अधिकार पाउनेछौं। म एउटा जहाज चलाउँछु, म ट्रक भाडा दौड्छु, म एक पोर्ट चलाउँछु, म विमान चलाउँछु। मैले लोमोमोइट्स र रेलहरू चलाउन सक्छु।
* तपाईं हामीलाई आफ्नो अन्नालियन प्रोजेक्टको बारेमा बढी बताउन सक्नुहुन्छ?
Anadolu परियोजना को दायरा भित्र, हामी मार्मार संग सम्बन्ध मा "भूमि बंदरगाहहरु bağlantılı" स्थापित गर्न शुरू गर्यो। जब मार्मारय पुरा भयो, यूरोप र एशिया बीचको भाडा ट्राफिक घातक वृद्धि हुनेछ। हामी तयार हुदै छौं।
इजमिट-कार्तेपेप, बेलिस्क-बोजुयुक र कोन्या, अंकारा, गेजिएप, मर्सिन र येनिसको रसद केन्द्रहरूमा स्थापित हुने टर्मिनलहरूले "ल्यान्डपोर्ट" को रूपमा सेवा गर्नेछन्। हामीसँग इजमिट / कार्तेपमा 200 एकस छ।
जब सुरंग खोलिएको छ, यो विदेशी देशहरूको रेलको संग्रहको केन्द्र हुनेछ। उदाहरणको लागि, यी टर्मिनलहरूको नयाँ भाडा जर्मनीबाट आउने ट्रेनमा थपिनेछ र अन्नालोनिया र छिमेकी देशका अन्य शहरहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान गरिनेछ।
हामीले भूमि खरिद पूरा गर्यौँ। हामी जर्मन स्टेट कम्पनी शेनकरसँग साझेदार छौं। तिनीहरू पनि भाग लिनेछन्। हामी सेप्टेम्बर जस्तै निर्माण सुरु गर्छौं। त्यस्तै गरी, Mersin / Yenice एनाटोलिया र इराक को लागि एक सभा क्षेत्र हुनेछ। हामीले अहिलेसम्म अननासो परियोजनामा ​​150 मिलियन डलर लगानी गरेका छौं। हामी मार्सिन र कोजेलीमा स्थापित गर्ने योजना रसद केन्द्रहरूको कुल क्षेत्र 700 हजार वर्ग मीटर हो।
युरोप र एशिया बीच केबल कार रेखा
अर्सानान: बीटीके र एशिया --अन्तर्गत बिग्रिएको ट्रांसपोर्ट ग्यारिटी यूरोप को बीच
एशिया-युरोप संक्रमणको लागि उच्च गतिको रेल
रेल-इन्जिन गरिएको माल ढुवानी वृद्धि हुनेछ
युरोप-काकेशस-एशिया रेखामा महत्त्वपूर्ण सहयोग
यूरोप-एशिया दिशाको नटम ल्याण्ड टर्मलको पंच बैठक
एशियाई र युरोपियन लाइनहरू मर्ज गरियो
5 मिनेटमा4यूरोप-एशिया मिनेटमा Besiktas होइन
यूरो एशियाली परिवहन बरन्डा र टर्की गरेको बढ्दैछ महत्व तालिका मा Kafkasya- acceding र उम्मेदवार देशहरूमा ...
कर्स, युरोप र एशिया ट्रांसपोर्ट बिन्दु हो, हृदय हुनेछ
आजको इतिहासमा: 20 डिसेम्बर 2016 युरोप र एशिया द्वारा भूमि ...
युरोप र एशियामा 60 देश रेलमार्फत जोडिएको छ
आजको इतिहासमा: 20 डिसेम्बर डिसेम्बर 2016 ले युरोप र एशिया महाद्वीपहरू ल्याएको छ ...
Halkalı-Kıkıkule रेलवे नेटवर्क को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो कि यूरोप को एशिया मा जोड्छ…
साल्लीलीमा स्तर क्रसिंग बन्द
टीसीडीडी महाप्रबन्धक सुलेमान करमनले डीटीडी भ्रमण गरे